Kpido: 2016 » Martech Zone
Tuesday, June 6, 2017 Wednesday, June 7, 2017 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 3 nkeji O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala ntakịrị ntakịrị ihe na ọkwa m na nso nso a. Mgbe ebipụta kwa ụbọchị abụrụla akụkụ nke DNA m n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ama m aka na ịgbalite saịtị ahụ ma na-enye ọtụtụ atụmatụ. Dịka ọmụmaatụ, ụnyaahụ, m gara n'ihu na oru ngo iji jikọta ndụmọdụ ndị dị mkpa na saịtị ahụ. Ọ bụ oru ngo nke m tinyere ihe dịka otu afọ gara aga yabụ were m oge ederede m wee mee ya ka ọ bụrụ nzuzo
Ịgụ Oge: 2 nkeji Anyị nwere obi ụtọ na nhazi anyị gara aga na Martech mana anyị matara na ọ dị obere. Mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ nweghị ndị ọbịa ọhụụ ka ọ na-emebu. Ekwenyere m na ndị mmadụ rutere saịtị ahụ, chere na ọ dị ntakịrị n'azụ ya - ha wee chee na ọdịnaya ahụ nwekwara ike ịbụ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, anyị mụrụ nwa ọhụrụ. Anyị hụrụ nwa ọhụrụ ahụ n'anya, anyị rụsiri ọrụ ike
Ịgụ Oge: 2 nkeji Tupu iwe iwe m na edemede a, biko gụọ ya nke ọma. Anaghị m ekwu na Google abụghị ezigbo nnweta nnweta ma ọ bụ na enweghị azụmaahịa azụmaahịa na atụmatụ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ usoro nyocha. Isi okwu m n’isiokwu a bụ na nnukwu azụmaahịa na --achị nsonaazụ ọchụchọ organic na akwụ ụgwọ. Anyị amatala na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa bụ ọwa ebe ego na-achị, ọ bụ ụdị azụmaahịa. Mmemme ga-aga mgbe niile
Ịgụ Oge: 3 nkeji Ọ bụ ezie na oge ekeresimesi nwere ike ịmalite, ebe a na-eme ndokwa maka ndị ọrụ na mince achịcha na-arụ ọrụ n'ọfịs, nke a bụkwa oge iji chee echiche tupu 2017 iji hụ na n'ime ọnwa iri na abụọ, ndị ahịa ga-eme ememme ahụ. ihe ịga nke ọma ha hụrụ. Agbanyeghị CMOs gafee mba ahụ nwere ike iku ume nke ukwuu mgbe ihe ịma aka 12 gachara, ugbu a abụghị oge iji nwee afọ ojuju. Na
Wednesday, December 14, 2016 Wednesday, December 14, 2016 Curt oge ntoju
Ịgụ Oge: 3 nkeji N’oge na-adịbeghị anya, elere m vidiyo nke onye njikwa Target na-eguzo n’elu ebe ndenye ọpụpụ ya, na-agwa ndị ọrụ ya okwu na-akpali akpali tupu ha emepe ụzọ maka ndị ahịa Black Friday, na-achịkọta ndị agha ya dịka ọ na-akwadebe ha maka agha. Na 2016, nsogbu ahụ bụ Black Friday buru ibu karịa mgbe ọ bụla. Ọ bụ ezie na ndị na-azụ ahịa nọrọ na $ 10 ihe na-erughị ka ha mere n'afọ gara aga, agbanyeghị, na ebere maka ndị ọrụ ha kwesịrị ịkwado onwe ha maka